Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 28/08/2020)
Raha vao ianao traikefa ny fampiononana, tsy hanahirana sy ankapobeny mahagaga ny fiaran-dalamby mandeha, Tena sarotra fiverenana ho amin'ny fiainana mialoha rail. Indrindra rehefa miresaka momba ny tsara indrindra lamasinina Eoropeana lalana amin'ny fahavaratra. A kaontinanta feno Toerana mahafinaritra lalana, miavaka endriky ary ny ambiny ny mampino toerana mba gawk amin'ny.
Train Travel atao hoe, raha lavitra indrindra Toerana mahafinaritra sy mampahazo aina fomba hialàna Eoropa, ary misy ny sasany izay tena lalana hitsoka ny sainao, indrindra fa mandritra Summer!
Best European fiaran-dalamby làlana: Mampiofana de Pignes, Frantsa
Ny Eurostar sy ny fiaran-dalamby tsipika hampahafantatra matetika kokoa tolotra. ary trano fandraisam-bahiny mpitsidika tonga soa amin'ny fara tampony eny-tahan'ny. Talaky masoandro Misy andro be voninahitra rehefa afaka manana zava-pisotro sy ny sakafo mihitsy aza ivelany.
Fantaro ity lalamby manokana, fa mandalo ny tsara indrindra faritra any Frantsa. Provence dia nalaza noho ny toetra sy ny endriky ny tarehy, ilay dia tokoa ny hevitra tsara, ary azo antoka fa iray amin'ireo tsara indrindra fiaran-dalamby Eoropeana lalana mba haka! On its way the fiaran-dalamby mandalo renirano, tetezana, tanàna kely tsara tarehy toa an'i St Andre les Alpes sy Entrevaux mandra-pahatongany farany - Digne les Bains - renivohitr'i Alpes-de-Haute-Provence.
Duration: 3 ora, 145 km
Rehefa handeha: lohataona, fahavaratra, latsaka
Lyon any Provence Lamasinina
Best European fiaran-dalamby làlana: Ny West Rhin Railway, Alemaina
Ny Rhin dia tsy iray amin'ireo tsara tarehy indrindra Eoropa renirano, fa izay koa ny kaontinanta iray amin'ireo zava-dehibe indrindra sakelidrano. Izany mikoriana ny sasany 1,320 kilaometatra avy Soisa ny lalana ho any Holandy, ary ny Ranomasina Avaratra. Ny iray amin'ireo tena manintona fizarana ity renirano mahery mikoriana amin'ny alalan'ny Alemaina ny Middle Rhin Valley (Rheintal), ny faritra voajanahary miavaka tsara tarehy. Raha ny tena izy, ny mihinjitra 'ny renirano mikoriana avy Mannheim any atsimo ny Koblenz tao avaratra ka mirehareha toerana manodidina mampitolagaga fa fizarana lehibe, antsoina hoe ny Rhin harambato (Rheinschlucht), efa voatondro ny UNESCO World Heritage Site.
Noho ny maro trano fiarovana ary ny tanàna manan-tantara, izany mihinjitra ny Rhin dia manana fiantraikany nandritra ny taonjato maro ny mpanakanto, mpanoratra, ary kira, ary azo antoka fa iray amin'ireo tsara indrindra fiaran-dalamby Eoropeana lalana mandritra ny vanim-potoana fahavaratra.
Mandeha manaraka ny reniranon'i Rhine ny fiarandalamby ary manambara ireo toerana mahafinaritra an'ny Aleman. Ny faritra misy vato misolampy amin'ny tanim-boaloboka, antitra teo an-tampon'ny lapa azy - dia afaka miala ny fiaran-dalamby sy ny fitsidihana ny malaza Lorelei vatolampy in St. Goarshausen, izay fiakarana 120 M ambonin'ny Rhin. Ny tena mahafinaritra lalana, mandritra ny diany ireo tanàna tsara tarehy alemaina.
Rehefa handeha: fahavaratra, latsaka
The Rauma Railway, Norvezy
Ny Rauma Railway lasa malaza bebe kokoa eo mpizaha tany, tahaka ny lasa iray amin'ireo tsara indrindra lamasinina Eoropeana lalana ao amin'ny lohataona. A diany ity dia mitondra anao lalamby akaikin'ny nahavariana toetra eo Andalsnes sy Dombas.
Ny diako eo Dombas sy Andalsnes no 114 km ny lavany, ary maka 1 ny ora sy ny 40 minitra. Ny fiaran-dalamby mandalo 32 tetezana – anisan'izany ny malaza Kylling Bridge, 59 metatra ambonin'ny renirano Rauma – ary mandalo 6 tonelina. Ny fiaran-dalamby manana varavarankely lehibe, mamela anao aho hiantehitra indray sy mankafy ny tsara tarehy toerana manodidina. Ny fiaran-dalamby mandeha ihany koa ny lasa malaza Trollveggen – ny Troll rindrina, Eoropa Ny tendrombohitra avo indrindra perpendicular rindrina.
Spring no fotoana tsara indrindra hanombohana handeha. Ny fiaran-dalamby mitantana tsara tarehy indrindra miadana amin'ny alalan'ny toerana manodidina. Tsy mijanona ny sary ao amin'ny Kylling Bridge sy ny Troll rindrina, ny mpitari-dalana no hanome anareo vaovao amin'ny alalan'ny fitenenana, ary koa hahazo ny bokikely tamin'ny vaovao momba ny zava-nisongadina ny dia.
Duration: 1.5 ora, 114 km
Rehefa handeha: Summer
Bernina Express, Soisa ho any Italia
namakivaky ny Nanketo Alpes eto ao amin'ny Express Bernina tokoa dia iray amin'ireo tsara indrindra fiaran-dalamby Eoropeana lalana hitsidika Eoropa! Teny an-dalana, ny Bernina Express Hollywood-pahatonga fomba nandritra ny 65 metatra-Landwasser avo Viaduct, ny sonia firafitry ny Rhaetian Railway sy ny UNESCO World Heritage toerana.
Mihitsy ny fiaran-dalamby mandalo 55 tonelina ary ny 196 tetezana eo amin'ny lalana avy any Chur ho any Tirano. Dia lavitra dia raisina ho zava mahagaga mandritra ny dia, toy ny Montebello curve miaraka amin'ny fomba fijery ny Bernina Massif, ny Morteratsch Glacier, ny telo farihy lej Pitschen, Lej Nair sy White Lake, ny Alp Grum sy ny Brusio boribory Viaduct. In vanin-taona mafana, ny dia azo hatrany Tirano ho Lugano sambo ny Bernina Express Bus.
Duration: 4 ora, 123 km
Vonona ny loharano any an-làlana tsara indrindra Eoropeana fiaran-dalamby? Save A Train Afaka manampy anao, amin'ny haingana sy mora famandrihana tsy misy saram miafina! Tena tsio-drivotra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-train-routes%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#scenictravel europetravel longtrainjourneys summerholidays fiaran-dalamby soso-kevitra